Abavelisi beengxowa zeNkunkuma ezinokuthengiswa kunye nabathengisi Imiqobo yokukhokela
Ingxowa yeT-shirt / ibhegi yevesti
Ibhegi yokuthenga / ibhegi yokuphatha
Flat ibhegi / ibhegi lothuli
Ingxowa yenkunkuma enokuchuma
IiRolls zeFilimu / Ukupakisha okuzenzekelayo kweeRoli
Ingxowa yeflethi enokuboliswa ziintsholongwane
Ivenkile enkulu yokurola
Ingxowa ye-Rolling Biodegradable
I-Oxo-ezinokuboliswa ziintsholongwane zebhegi
Ingxowa yenkunkuma enokuchumeka ngaphandle kwezithako zeplastiki！
Umzi mveliso wethu iingxowa zenkunkuma ezinokuchuma kunye nezinto eziqinisekisiweyo njengezichumileyo ngokuhambelana nomgangatho waseYurophu EN 13432. Ngokusebenzisa iibhegi kwizixhobo ezinobungozi kokusingqongileyo ubonakalisa umhlaba wangaphandle kunye nabathengi bakho ukuba unembonakalo eluhlaza kunye nenkxaso yophuhliso oluzinzileyo.
Kwimeko apho ufuna ibhegi yenkunkuma enoyilo kunye nelogo yakho, ii-Leadpacks zinokunceda. Sibonelela ngeengxowa ngobukhulu obahlukeneyo, iimilo kunye nezinyuko ukuze zilungele zonke iimfuno. Singongeza iilogo, imifanekiso okanye nayiphi na imiyalezo ejolise kwiprofayili. Iingxowa zokuqhekeka ezinokuboliswa ziintsholongwane ziprintwe ukuya kuthi ga kwimibala emi-4 kumacala amabini.
Ubunzima beCarf Bags Shelf Life ziinyanga ezili-10-12.
Igama lomxholo Ingxowa yenkunkuma enokuchuma
Izinto eziphathekayo Pla / PBAT / Umbona Starch
Ubukhulu / Ubukhulu Isiko
Ukusetyenziswa Inkunkuma / Ukurisayikilisha, njl
Uphawu Izinto ezinokuboliswa ziintsholongwane nezicokisekileyo, Umsebenzi onzima, ukuPrinta okucocekileyo kunye nokuPrinta ngokugqibeleleyo
Intlawulo I-30% idiphozithi ngo-T / T, amanye ama-70% ahlawulwe ngokuchasene nekopi yetyala yomthwalo
Ulawulo lwemeko Izixhobo eziPhucukileyo kunye neQela elinamava leQC liya kujonga izinto, iimveliso ezigqityiweyo kunye nezigqityiweyo ngokungqongqo kuwo onke amanyathelo ngaphambi kokuhambisa
Isatifikethi EN13432, ISO-9001, D2W isatifikethi, ingxelo SGS Test njl
Ixesha lokuzisa Ukuthunyelwa ngeentsuku ezingama-20-25 emva kokuhlawula
Okwangoku singqina umdla okhulayo wokunciphisa ukusetyenziswa kweeplastiki zemveli, zombini ngabathengi kwaye, ngakumbi, nangabezopolitiko. Amazwe aliqela sele angenise isibhengezo ngokubanzi kwiingxowa zeplastiki. Le meko isasazeka kwihlabathi lonke.
Iingxowa zeephedi zeepakethe kwi-100% yezinto ezinokuboliswa ziintsholongwane kunye nezinto ezinokuchuma zinokuba negalelo kwiprofayili eluhlaza yenkampani ngelixa kwangaxeshanye zinceda ukuphucula imeko-bume. Ngesazela esilungileyo, ungasebenzisa ibhegi yenkunkuma enenjongo yokwenza nayiphi na injongo kunye nesichumisi emva kokuyisebenzisa.
Kwixesha elizayo, kuya kubaluleka ngakumbi ukusebenzisa izixhobo, ezingachaphazeli okusingqongileyo. Zombini kwinkqubo yemveliso kwaye kamva xa zisetyenzisiwe.
Ingxowa yenkunkuma enokuchumeka isekwe kwinxalenye enkulu yezixhobo ezinokuhlaziywa ezivela kwizinto ezisekwe kwizityalo. Oku kuthetha ukuba i-CO2 encinci ikhutshelwa esibhakabhakeni, kuba izityalo zifunxa i-CO2 njengoko zikhula, ngokwenjenje zenza impembelelo encinci kwindalo esingqongileyo kunakwenziwa kweplastiki esekwe kwioyile.
Egqithileyo Ingxowa yeflethi enokuboliswa ziintsholongwane
Iingxowa zeNkunkuma ezinokuboliswa ziintsholongwane
Iingxowa zenkunkuma ezinokuchuma
Iingxowa zePlastiki zenkunkuma
Kumgangatho we-4, Nombolo 25, Siming Park, Meixi Road, Tongan Dist., Xiamen City, Fujian, China
Ukuba unemibuzo malunga neemveliso zethu, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi nge-imeyile okanye i-WhatsApp, siza kukuphendula kwangoko.